တရားစီရင်ရေး – Eleven Media Group
Posted on September 3, 2018 September 4, 2018 by Eleven Media Group
တရားစီရင်ရေးဟူသည် နိုင်ငံတော်ဟု အမည်ခံလျက် တရားဥပဒေများကို ဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးသည့် တရားရုံးများ၏ စနစ်ဖြစ်သည်။ တရားစီရင်ရေးသည် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် အတွက်လည်း ယန္တရားတစ်ရပ်ကို ထောက်ပံ့သည်။ အာဏာများခွဲဝေမှု သဘောတရားအရ တရားစီရင်ရေးသည် အထွေထွေ သဘောအားဖြင့် ဥပဒေပြုရေးတာဝန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်မရှိဘဲ တရားဥပဒေများကို အချက်အလက်များအတိုင်း ဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးသည့် တာဝန်သာရှိသည်။ သို့သော် တရားစီရင်ရေးသည် အခြားတရားရုံးများ လိုက်နာရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်သည့် ကျင့်ထုံးဥပဒေများကို ပြုနိုင်သည်။ တရားစီရင်ရေး၏ တာဝန်သည် ဥပဒေများအောက်၌ တရားမျှတမှုကို တန်းတူညီမျှ ရရှိရေးဖြစ်သည်။
တရားစီရင်ရေးများစွာတို့တွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခွဲတစ်ရပ်သည် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ဥပဒေများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အာဏာရှိသည်။ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး အာဏာရှိသည့် တရားရုံးများသည် မူရင်းဥပဒေပြုမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းထားမှုများ ကဲ့သို့သော ပိုမိုမြင့်မားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မလျော်ညီကြောင်း တွေ့ရှိသည့်အခါ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့် ရှိတတ်သည်။ တရားသူကြီးများသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ကို ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် အရေးကြီးသော အင်အားစုများအဖြစ် ပါဝင်သည်။ လူထုတစ်ရပ်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထူထောင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တရားရုံး၏ ကျမ်းသစ္စာအပေါ် သစ္စာစောင့်သိသော ဘက်မလိုက်ဘဲ အသိဥာဏ် ကြွယ်ဝသည့် ဥပဒေပညာရှင်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသို့မဟုတ် ခန့်ထားခြင်းကို သတိကြီးမားစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေသည် အုပ်ချုပ်ရန်နှင့် အများလက်ခံရန်ဖြစ်ပါက တရားရုံးများသည် တရားမျှတမှုအပေါ် သစ္စာရှိခြင်းကို ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
တရားစီရင်ရေးဟူသည့် စကားရပ်ကို နိုင်ငံတော်၏ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ထဲမှ တစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး တရားသူကြီးများနှင့် အခြားသော စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုပေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ခြုံငုံခေါ်ဆိုသည်။ ယင်းတရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်၌ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးအား ထိန်းသိမ်းသည့် အခြားဝန်ထမ်းအားလုံးလည်း ပါဝင်သည်။ အချို့သော တိုင်းပြည်များနှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်များတွင် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို ချဲ့ထွင်ထားပြီး တရားစွဲဆိုရေးအရာရှိ၊ အစိုးရရှေ့နေ၊ အစိုးရဌာနများအပေါ် မကျေနပ်ချက်များကို စုံစမ်းတင်ပြရန် အစိုးရက ခန့်ထားသောအရာရှိ၊ ပြည်သူ့စာချုပ်စာတမ်း သက်သေခံရှေ့နေ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ရဲဌာနနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကူအညီပေးရေး အရာရှိကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်ဥပဒေရေးရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ ပါဝင်သည်။ ယင်းအင်စတီကျူးရှင်းများအား တစ်ခါတစ်ရံ တရားရုံးများကို အုပ်ချုပ်သည့် တူညီသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကပင် ကြီးကြပ်ပြီး အချို့နိုင်ငံများတွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခွဲ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့က ရှေ့နေများနှင့် ပုဂ္ဂလိက စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာ အရာရှိများ ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂလိကဥပဒေရေးရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တရားစီရင်ရေး၏ တာဝန်သည် ဥပဒေများအောက်၌ တရားမျှတမှုကို တန်းတူညီမျှ ရရှိရေးသာဖြစ်သောကြောင့် တရားမျှတမှုအပေါ် သစ္စာရှိခြင်းကို ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်
Posted in EditorialsTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားမျှတမှု
အစိုးရက ပြည်သူကို တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိသကဲ့သို့ ပြည်သူကလည်း အစိုးရအား တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် ရှိသည်ကို လမ်းဖွင့်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား
Posted on August 5, 2018 August 6, 2018 by Eleven Media Group
အစိုးရက ပြည်သူကို တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိသကဲ့သို့ ပြည်သူကလည်း အစိုးရ၏ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မှားယွင်းနေပါက တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ပြည်သူလူထု နားလည်ရန်နှင့် ယုံကြည်လာရန် လမ်းဖွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်ရှိ Kafe in Town ၌ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်လည်စုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရကို တရားစွဲခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ကိုယ့်အစိုးရ ပြည်သူလူထုကနေ ရွေးကောက်တဲ့ ကိုယ့်အစိုးရလုပ်တာ မတရားဘူးမှန်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က တရားခံဘက်က လိုက်ရမှာပဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး။ ဟို ဘက်အစိုးရတုန်းက ခင်ဗျားတို့စွဲတယ်။ ဒီ ဘက်အစိုးရကျတော့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းမမှန်ရင် ခင်ဗျားတို့ မစွဲဘူးလားဆိုရင် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့စွဲတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့စွဲတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကို တရားစွဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ စာချွန်တော်က လက်ခံထားတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ရှိနေမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဘက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရှိနေစဉ်မှာ ဖော်ထုတ်ပြီး ရပ်တည်နေမယ်။ အစိုးရကို တရားမစွဲရဲဘူးဆိုတဲ့ ရှေ့နေများရှိရင် လက်ညှိုးထောင်ပါ။ ကျွန်တော် အဲဒီရှေ့နေမျိုးကို ကျွန်တော် ပယ်ချပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ရှေ့နေများအနေဖြင့် စီးပွားရေးသက်သက် ရပ်တည်သည့် အမျိုးအစားထဲမှ ခွဲထွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်ရန်လိုကြောင်း၊ အစိုးရယန္တရားအဖွဲ့၏ လွဲမှားမှုများ တွေ့ပါက ရှေ့နေများအနေဖြင့် လက်မနှေးဘဲ တရားစွဲကြရန် ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က စီးပွားရေးသက်သက် ရပ်တည်တဲ့ ရှေ့နေအမျိုးအစားထဲက ခွဲထွက်ဖို့တော့လိုပြီ။ ပြည်သူတွေမြင်အောင် ပြည်သူတွေကနေပြီး အလေးထားတဲ့ ငါတို့မတရားခံခဲ့ရတာပါလား ဆိုတဲ့ဘက်က ရပ်တည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုအမှုမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ရက် အနေနဲ့လည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။ ခင်ဗျားက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်အစိုးရကို ဘာလို့ တရားစွဲမှာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ ရှေ့နေတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ ရှေ့နေကနေပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပင်မဓာတ်ခံက ရှေ့နေလုပ်ငန်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က လွဲချော်တဲ့ အစိုးရ ယန္တရားအဖွဲ့ရဲ့ လွဲမှားတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ လက်မနှေးကြပါနဲ့။ တိုင်ပင်ပါ။ အကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံသား၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေကို ပြည်သူလူထု ကျင့်သုံးသည်ကို သိပ်မတွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ရဲစခန်းတွင် တိုင်ချက်ဖွင့်လေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့တိုင်ချက်ဖွင့်ရာတွင် ရဲစခန်းက အူကြောင်ကြောင် လုပ်နေပါက ထိုစခန်းမှ စခန်းမှူး (သို့မဟုတ်) အမှုဖွင့် မပေးသူကို တိုင်ချက်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရှေ့နေများမှာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး အသက်သွင်းရမည့် တာဝန်ရှိသဖြင့် ရှေ့နေများအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ဦးအောင်သိန်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on အစိုးရက ပြည်သူကို တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိသကဲ့သို့ ပြည်သူကလည်း အစိုးရအား တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် ရှိသည်ကို လမ်းဖွင့်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြည်သူအချင်းချင်း ကျေအေးခဲ့သည့်အမှုသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တိမ်းစောင်းစေနိုင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစစ်ဆေးမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြား
Posted on July 29, 2018 July 30, 2018 by Eleven Media Group
ဓာတ်ပုံ – Yangon Region Gorernment
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြည်သူအချင်းချင်း ကျေအေးခဲ့သည့်အမှုသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တိမ်းစောင်းသွားစေနိုင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ယင်းကိစ္စကို စစ်ဆေးသွားမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သည် ဇူလိုင်၂၉ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့ရုံးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
“တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကို ထောက်ပြတာကတော့ ပြည်သူအချင်းချင်း ကျေအေးတဲ့အမှုကို ထောက်ပြသွားတယ်။ အမှန်တော့ ဒီလူသေမှုဟာ ပြည်သူတွေ ဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက် တရားလိုဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရဖြစ်တယ်။ ဒီအမှုမျိုးဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက တရားလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမှုကို ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း ကျေအေးမယ်ဆိုလည်း သူ့အနေနဲ့ လက်ခံဖွယ်ရာမရှိဘူးလို့လည်း တင်ပြသွားတယ်” ဟု ဒဂုံမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက တွေ့ဆုံပွဲအပြီး မီဒီယာများအား ပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲ၌ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြနေသည့် ပြည်သူချင်းကျေအေးခဲ့သည့် အမှုကိစ္စကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေဖြင့် အလေးပေးပြောကြားသွားခဲ့ပြီး ယင်းမှာ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တိမ်းစောင်း သွားစေနိုင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာ ၀န်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ စစ်ဆေးသွားမည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပန်းဘဲတန်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦးက မီဒီယာများအား ပြောကြားသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင် အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်တုန်းကတောင်မှ မကြားဖူးတဲ့ အရာတွေကို ကြားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောသွားပါတယ်။ သူကတော့ ဘယ်အမှုကို ရည်ညွှန်းပြီးတော့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခု မီဒီယာတွေမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အမှုတွေပါ။ ပြည်သူ၊ ပြည်သူချင်းကနေပြီးတော့ ပြန်ကျေအေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုပါ သမ္မတကြီးက အလေးပေးပြောသွားတယ်။တချို့ကိစ္စတွေက ပြည်သူပြည်သူချင်း ကျေအေးလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တိမ်းစောင်းသွားစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကိုလည်း သူဒီကနေပြန်သွားရင် နေပြည်တော်မှာ သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ ဒီကိစ္စ တွေကို စစ်ဆေးမယ်လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်” ဟု ဦးသန်းနိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
လတ်တလောတွင် ပြည်သူအချင်းချင်း ကျေအေးခဲ့သည့် အမှုအနေဖြင့် ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးကို သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူသုံးဦးမှာ ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်များ၏ အမှုပိတ်သိမ်းပေးမှုကြောင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍအပေါ် ပြည်သူများ အကြား ဝေဖန်မှုမြင့်တက်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပြည်သူလူထုအကြား အာရုံစိုက်မှု များပြားသည့် အမှုများအပေါ် အချိန်ကြန့် ကြာနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြည်သူလူထုသွေးအေးပြီး အာရုံမစိုက်တော့သည့် အချိန်တွင်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မည်လားဆိုပြီး ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကို မေးခွန်းထုတ်သွားကြောင်းလည်း ဦးကျော်ဇေယျ၏ပြောကြားမှုအရ သိရသည်။
ဆက်လက်၍ သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မကြန့်ကြာစေဘဲ လေလံအမြန်ဆုံးတင်နိုင်ရေး၊ သက်သေခံစရိတ်များ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ကိစ္စများကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုက်တွန်းသွားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သည် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်သုံးခုနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on လတ်တလောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြည်သူအချင်းချင်း ကျေအေးခဲ့သည့်အမှုသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တိမ်းစောင်းစေနိုင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစစ်ဆေးမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြား
Posted on June 26, 2018 June 27, 2018 by ဦးသိန်းသန်းဦး (မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်)
ဆိုရှယ်လစ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ပြည်သူစီရင်သော ပြည်သူ့တရားစီရင်ရေးဟု ဆိုသော်လည်း ပြည်သူများမှာ တရားစီရင်နိုင်သည့် ပညာအရည်အချင်း၊ အခြေအနေ၊ ဘ၀အဆင့်အတန်းမရှိ။ အနှစ်သာရအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် မဆလပါတီ၏ ကေဒါများက တရားစီရင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာတွင် ဂျူရီစနစ်ဖြင့် တရားစီရင်မှုများ ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပုံစံမတူ။ တရားစီရင်ရေးစနစ်၏ အဆင့်နေရာတိုင်းတွင် မဆလပါတီက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားပြီး တစ်စထက်တစ်စ စစ်ဘက်အရာရှိများက အစားထိုးဝင်ရောက် နေရာယူလာခဲ့ကြသည်။ ဥပဒေ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ၊ ပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝခြင်းမရှိသူများကို ပါတီဝင်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် တရားခွင်သို့ တင်ပေးလိုက်သည့် ကမောက်ကမ တရားစီရင်ရေး ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။
ဗဟိုတရားရုံးမှအပ ကျန်တရားရုံးများတွင် ပါတီ၏စွက်ဖက်မှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ စာရိတ္တအကျင့်ပျက်ခြစားမှုမှာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလိုပင် ဖြစ်တည်လာသည်။ ၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး စနစ် ပြိုလဲပျက်စီးလာပြီး ‘မျောက်အုန်းသီးရ’ တရားရေးစနစ်ဖြစ်လာသည်။ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ယဉ်ကျေးမှုလည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထင်ရှားသည့် ရှေ့မီနောက်မီ ရှေ့နေကြီးတစ် ဦးက ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် တရားစီရင်ရေးမှာ မြေရှင်အရှင်းရှင် တရားစီရင်ရေး စနစ်ဖြစ်၍ ‘ငွေများတရားနိုင်’ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု ပြည်သူ့တရား ပြည်သူစီရင်သည့် ဆိုရှယ် လစ်ခေတ်တွင်မူ ‘ဆောင်ပုဒ်’ ပြောင်းသွားကြောင်း ‘ငွေများ တရားနိုင်’ မဟုတ်တော့ဘဲ ‘ငွေနည်း တရားရှုံး’ ဟု လှောင်ပြောင်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနေ၀င်းက တိုင်းပြည်သို့ မိန့်ခွန်းပြောကြား ရာတွင် မအောင်မြင်မှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများကို ၀န်ခံခဲ့သည်။ သူ့မိန့်ခွန်းတွင် မဆလပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ပါတီကလပ်စည်းများ အထူးအစည်းအဝေးတွင် တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်း ကဏ္ဍအလိုက် အစီရင်ခံရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထိုသို့အစီရင်ခံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည် သူ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အောင်ဟိန်း တစ်ဦးတည်းကသာ ပြည်သူ့တရားစီ ရင်ရေးစနစ် လုံးဝ မအောင်မြင်ကြောင်းနှင့် တိုင်းပြည်အခြေအနေ၊ စီးပွားရေးအပါအ၀င် ဘက်ပေါင်းစုံ ယိုယွင်းပျက်စီးလျက်ရှိ ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မဆလလက်ထက် ပြည်သူ့တရားသူကြီးများအဖွဲ့အနက် ဦးတင်အောင်ဟိန်းခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်သူ့ တရားသူကြီးအဖွဲ့မှာ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံး ဖြစ်သည်။ ဗဟိုတရားရုံးသို့ ရောက်ရှိလာလျှင် ပေါ်လစီအမှုများမှအပ အမှန်တရားနှင့် နီးစပ်အောင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပါသည်။ အဆိုပါ တရားသူကြီးအဖွဲ့မှာ
ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့
(၁-၁-၈၈ နေ့မှ ၁၈-၉-၈၈) နေ့အထိ
၁။ ဦးတင်အောင်ဟိန်း ဥက္ကဋ္ဌ
၂။ ဦးကိုကြီး အဖွဲ့ဝင်
၃။ ဦးခင်မောင်ကျော် အဖွဲ့ဝင်
၄။ ၀ဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ ဦးတွမ်းမှုန် အဖွဲ့ဝင်
၅။ ဦးထွန်းတင် အဖွဲ့ဝင်
၆။ ဦးဘမော် အဖွဲ့ဝင်
၇။ ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး အဖွဲ့ဝင်
၈။ ဦးဝင်းမောင် (၁) အဖွဲ့ဝင်
၉။ ဦးအေးစန်း အဖွဲ့ဝင်
၁၀။ ဒေါက်တာမန်းသက်စံ အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ဦးမျိုးမြင့် အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ဦးဝင်းမောင် (၂) အဖွဲ့ဝင်
■ သမိုင်းတင် မဆလတရားစီရင်ရေးဇာတ်ဝင်ခန်း
ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်း သမိုင်းဝင်မြို့နယ်တစ်ခုမှ မြို့နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းမှာ ပြောစမှတ်တွင်လောက်အောင် ထင်ရှားသည်။ တစ်ရက်တွင် အမှုရုံးချိန်းယူကြရာ တရားသူကြီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ဖေဖော်ဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ကို ချိန်းဆိုသည်။ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများက ‘‘ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား ဖေဖော်ဝါရီမှာ ၃၁ ရက် မရှိပါဟု’’ မရဲတရဲတင်ပြရာ ဥက္ကဋ္ဌ က ဒေါသတကြီးဖြင့် ‘‘ဟေ့ကောင် ရှေ့နေတွေ ငါ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငါချိန်းတဲ့ရက် မင်းတို့လာခဲ့ လျှာမရှည်နဲ့ ဒါပဲ’’ ဟု ပြန်ဖြေသည်ဟူသတတ်။
တစ်ခါသားတွင်လည်း အမှုတစ်ခုတွင် တရားခံရှေ့နေက မိမိတရားခံ အပြစ်မရှိကြောင်း စီရင်ထုံးအကိုးအကားများဖြင့် အကျယ်တ၀င့် လျှောက်လဲနေရာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက နားကြားပြင်းကတ်လာပြီး ရုတ်တရက်ဝင်ဖြတ် ကာ ‘‘ဟေ့ကောင် ရှေ့နေ မင်း စကားတတ်တိုင်း လျှောက်ပြောမနေနဲ့ မင်းကောင်ကို ထောင်ခုနစ်နှစ်ချဖို့ မနေ့ညကတည်းက ငါ စဉ်းစားပြီးပြီ’’ ဟု ပြောသည်ဟူသတတ်။
တစ်ခါသော် အနှီဥက္ကဋ္ဌကြီး၏ရုံးသို့ မန္တလေးမြို့မှ နာမည်ကြီးရှေ့နေတစ်ဦးက တရားခံများအတွက် လာရောက်လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက မြို့နယ်ကျော် ငှားသည့်အတွက် တရားခံများကို မကျေနပ်။ မန္တလေးမြို့မှ ရှေ့နေကြီးကိုလည်း ဂိုက်များသည်ဟုထင်ကာ အမြင်ကတ်နေသည်။ သို့ဖြင့် ရှေ့နေကြီးကို ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းအတွင်းခေါ်ကာ လက်ဖက်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံသည်။ အမှုမှာ နောက်ရက်အမိန့်ချမည်ဖြစ်၍ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ‘‘ကဲ ရှေ့နေကြီး ဒီအမှု မနက်ဖြန် အမိန့်ချမှာ ခင်ဗျား ဘယ်လိုထင်သလဲ’’ ဟု မေးသည်။ ‘‘ကံဆိုး ကံကောင်းပါပဲခင်ဗျား’’ ဟု ရှေ့နေကြီးက ပြန်ဖြေသည်။ ‘‘ခင်ဗျားဟာက ကံဆိုးကံကောင်း ဆိုတာ ဘာလဲဗျ’’ ဟု ဥက္ကဋ္ဌကြီးက မေးသည်။ ရှေ့နေကြီးက ကံဆိုးကံကောင်းဆိုတာ ဒီလို ပါဟု ရှေ့နေကြီးက ရှင်းပြသည်။ ‘‘သူတို့ ကံဆိုးပြီး ကျွန်တော် ကံကောင်းရင် မနက်ဖြန် သူတို့ ထောင်ကျမယ်လေ။ ဒါဆို ကျွန်တော် အယူခံ မှုထပ်လိုက်ရလို့ ပိုက်ဆံရမှာ ကျွန်တော် ကံကောင်းတာပေါ့။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် ကံဆိုးပြီး သူတို့ ကံကောင်းရင်တော့ မနက်ဖြန် သူတို့ လွတ်သွားပြီး ကျွန်တော် ပိုက်ဆံ ထပ်မရတော့ဘူး’’ ဟု ဖြေခဲ့သည်ဆို၏။ ဥက္ကဋ္ဌကြီး က ရှေ့နေကြီးကို အတော်ချစ်ခင်ပုံရသည်။ နောက်နေ့တွင် တရားခံများအားလုံး ကွင်းလုံး ကျွတ် လွတ်သွားသည်ဟူ၏။ ဤအဖြစ်အပျက်သုံးခုမှာ ရွှေဘိုမြို့နှင့် မလှမ်းမကမ်း မြို့နယ်လေးတစ်ခုတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာ ယခုအချိန်ထိ အသက်ရှင်နေသေးသည်ဆိုပါသည်။
■ ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်
ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး မဆလပါတီ၏ မရှုမလှဇာတ်သိမ်းခန်းတွင် မဆလ ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် သမ္မတဖြစ်ခဲ့သော ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ တပ် ရင်း (၄) တွင် တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ (၈) တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဒေါက်တာမောင်မောင်မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ဖြစ်ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်တွင် သိမီသူတစ်ဦးက ဖော်ပြလာပါသည်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ္တမမြောက်သမ္မတအဖြစ် (၁၉. ၈. ၁၉၉၈) ရက်မှ (၁၈.၉.၁၉၉၈) ထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်သူဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဖောင်းကားစားမောင်မောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခံရသူဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ အခါပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ (၁၁.၁.၁၉၂၅) တွင်ဖွားမြင်ပြီး (၂.၇.၁၉၉၄) တွင် ကွယ်လွန်သည်။ ၁၉၆၄ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် ၁၉၄၉ တွင် ဥပဒေ ဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ တွင် Utrecht (University ) မှ (LL.D) 1962 တွင် ယေးလ် တက္ကသိုလ်မှ JSD ဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်က ဆိုရှယ်လစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ထင်ရှားသော တပ်မှူးကြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ၀တ်စုံပြည့် အာဏာသိမ်းလေ့ကျင့်ပွဲတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးနှင့်အတူ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုထံ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် သွားရောက်ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ တပ်မှူးများ အနက် သဘောတရားဆရာအဖြစ် ထင်ရှားသူ ဖြစ်ပြီး ဥပဒေပညာ ကျောထောက်နောက်ခံရှိသည်ဟု မကြားဖူးပါ။
တရားစီရင်ရေး (၁၉၈၈-၂၀၁၀) (သို့မဟုတ်)နောက်လာတဲ့မောင်ပုလဲ
၁၈.၉.၁၉၈၈ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န.၀.တ) က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေဖြင့် တရားရုံးအဆင့်ဆင့် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းသည်။ (၂၇-၉-၁၉၈၈)ရက် တွင် တည်ထောင်လိုက်သည့် တရားရုံးချုပ်တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။
၁။ ဦးအောင်တိုး – တရားသူကြီးချုပ်
၂။ ဦးအေးအုန်း – တရားသူကြီး
၃။ ဦးကျော်တင့် – တရားသူကြီး
၄။ ဦးမျိုးထွန်းလင်း – တရားသူကြီး
၅။ ဦးကျော်ဝင်း – တရားသူကြီး
ဤဥပဒေကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေးဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် (န.၀.တ)အစိုးရက နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံများ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်သူများကို စစ်ခုံရုံးများ ထူထောင်ကာ ဖိနှိပ်သည်။ စစ်ခုံရုံးဖြစ်၍ မည်သည့်ဥပဒေကိုမျှ လိုက်နာရန် မလိုဘူးဆိုကာ တစ်ချက်လွှတ် တရားစီရင်ခဲ့သည်။
■ စစ်ခုံရုံးနှင့် ၀ါးလုံးကွဲဟာသများ
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်တွင် တော်လှန်ရေးတစ်ခု ကျရှုံးချေမှုန်းခံရသော်လည်း ထိုတော်လှန်ရေး၏ တောင်းဆိုချက်များကိုမူ လိုက်လျောရစမြဲရှိသည်ဟု ဆိုရိုးရှိသည်။
လက်ဝဲ၊ လက်ယာ၊ မြေပေါ်၊ မြေ အောက်၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖျက်သမားများဟု စစ်အာဏာရှင်များက ကင်ပွန်းတပ်ခံရသည်အထိ ၎င်းတို့နှင့် လက်တစ်ဆုပ်စာ အလိုတော်ရိများမှအပ လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ကမ္ဘာတွင်မရှိဖူးသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အုံကြွမှုကြီးကို သွေးချောင်းစီး သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်း အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ဒုတိယမျိုးဆက် စစ်အာဏာရှင်များက ပါတီ စုံဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိုသည်ကို မလွှဲမရှောင် သာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရသည်။
သို့ရာတွင် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ရဟန်းရှင်၊ ပြည်သူများကို စစ်ခုံရုံးတင်၍ သေဒဏ်၊ ကျွန်းဒဏ်၊ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ် သည်။ စစ်ခုံရုံးတွင် ပါဝင်သော ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အ ဖွဲ့ဝင်များမှာ စစ်ဘက်အရာရှိများသာ ဖြစ်သည်။ ခုခံချေပခွင့်မရှိ၊ ရှေ့နေငှားခွင့်မရှိ ကြီးလေးသည့် ပြစ်မှုကြီးများကိုပင် အကျဉ်းနည်းဖြင့် စစ်ဆေးသည်။
ကျွန်တော့်အား မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ခုံရုံး အမှတ်(၄)က ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ် စီမံမှုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၅(ည)၏ အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်မှာ (၇)နှစ်ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်(၁၄)နှစ် ချမှတ်သည်။ အမှုလိုက်အရာရှိ တရားလိုမှာ SB မှ ရဲအုပ်သန်းစိန်ဖြစ်သည်။ အမှုလိုက်ဥပဒေအရာရှိမှာ ဦးဂျီသန်းဖေ(ကွယ်လွန်)ဖြစ်သည်။
အမှုစစ်သည့်အခါ တရားလိုက မစိုးရိမ်တိုက်မှ ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည့် သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်းများကို ရုံးသို့ သက်သေခံတင်သည်။ ထိုအခါ စစ်ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးက ‘‘ပိုင်ရှင်မဲ့လို့ မလုပ်နဲ့လေ၊ သိန်းသန်းဦးဆီက မိတာလို့ ရေးလိုက်’’ ဟု ပြောသည်။ ထိုအခါ ဥပဒေအရာရှိက ‘‘ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဗျား ရှာဖွေပုံစံမှာ ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းလာပြီး ပေးအပ်သူအဖြစ် ကောင်စီက လက် မှတ် ရေးထိုးထားတာ။ သိန်းသန်းဦးဆီက မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ’’ဟု ပြန်ပြောပါသည်။ ခုံဥက္ကဋ္ဌ က ‘‘ဒါ စစ်ခုံရုံးပဲ။ အကုန်လုပ်လို့ရတယ်။ သိန်းသန်းဦးဆီက မိတယ်လို့သာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်’’ဟု ခပ်ပြတ်ပြတ် အမိန့်ပေးပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့ တရားခံ ၂၂ ဦးက တိုင်ပင်မထားဘဲ ၀ါးကနဲ ရယ်လိုက်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ခုံဥက္ကဋ္ဌမှာ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်းဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဦးမှာ လက်မောင်းတွင် ဆီမီးခွက်တံဆိပ်ဖြင့် ဗိုလ်မှူး ခင်မောင်တင့်ဟု ကျွန်တော်မှတ်သားမိ ပါသည်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့အပေါ် အရည် မရ အဖတ်မရ စွပ်စွဲချက်များကို ရဲနှင့်ထောက် လှမ်းရေးများ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လာရောက်ထွက်ဆိုနေကြရာ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စား ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေသည်မှာ ခုံရုံးစားပွဲပေါ်တွင် ခင်းကျင်းထားသော စမူဆာများ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် အကြော်များ၊ လက်ဖက်ရည်ခွက်များ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူ ကျွန်တော်တို့ က တိုက်ထဲတွင် ငတ်နေ၍ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားခန်းဝင်ရန် စစ်ခုံရုံးနားသည်နှင့် ကျွန်တော်တို့က မုန့်ပန်းကန်များ ဆွဲယူပြီး လက်ဖက်ရည်များ ၀ိုင်းတီးလိုက်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော စစ်ခုံရုံးများစွာဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ၊ အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားများ သေ ဒဏ်၊ ကျွန်းဒဏ်၊ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်အသီးသီး ချမှတ်လက်စားချေခဲ့သည်။
Posted in FeaturesTagged တရားစီရင်ရေး, တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ, တရားရုံး, ဦးသိန်းသန်းဦးLeaveaComment on တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ (၉)
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ (၇)
(၁၉၄၈-၁၉၆၂) ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် တရားစီရင်ရေး
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သော တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် (Constituent Assembly) က လွတ်လပ်သော သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (Union of Burma) ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြေခံဥပဒေတွင်ပါဝင်ရမည့် အချက်များ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါဝင်မည့် ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေး၊ တရားစီရင်မှုများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ပါဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးအက်ဥပဒေ (Union Judiciary Act 1948) ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (၄-၁-၁၉၄၈) တွင် စတင်အသက်ဝင်အာဏာ တည်ခဲ့သည်။ ယင်းဥပဒေအရ တရားလွှတ်တော် (High Court) နှင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ် (Supreme Court) ကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ် (Superme court) ကို နိုင်ငံတော်တရားဝန်ကြီးချုပ်က ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ လိုအပ်သော တရားရေးဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ပါလီမန်၏ ထောက်ခံချက်မရပါက တရားရေးဝန်ကြီး လေးဦးထက်ပို၍ မခန့်အပ်ရဟု ကန့်သတ်ထားသည်။ အပိုင်း လေးပိုင်းနှင့် ပုဒ်မပေါင်း ၃၇ ခု ပါဝင်သည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများသည် အသက် ၆၅ နှစ်အထိလည်းကောင်း၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများသည် အသက် ၆၀ နှစ်အထိလည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းဥပဒေတွင် တရားမခရိုင် တရားသူကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ သီးခြားအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အက်ဥပဒေအမှတ် ၅၅ ဖြင့် ၁.၄.၁၉၅၁ ရက်စွဲပါ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် တရားရုံးများ အက်ဥပဒေထပ်မံပြဋ္ဌာန်းသည်။
(ခ) ရာဘက်ခရိုင် တရားမရုံး
(ဂ) နယ်ပိုင် တရားမရုံးနှင့်
(ဃ) မြို့နယ် တရားမရုံးတို့ကို ထူထောင်သည်။
တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်း အတိအကျသတ်မှတ်သည်။ ထို့ပြင် ၁၅-၁-၁၉၅၂ ရက်တွင် ၁၉၅၁ ခုနှစ် အက်ဥပဒေအမှတ် ၂၃ အဖြစ် အထူးတရားမရုံး အက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။
အင်္ဂလိပ်ပုံစံ တရားစီရင်ရေးစနစ် အခြေကျလာခြင်း
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တည်ထောင်ခဲ့သည့် တရားရုံးများက ကိုလိုနီခေတ်တွင် အခြေစိုက်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်ရိုးရာတရားစီရင် ရေးစနစ်ကို မြန်မာမှုပြုကာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့၏ရိုးရာ ဥပဒေစနစ် (Common Law System) ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလန်တွင် ခရစ်နှစ် ၁၀၆၆ က တည်းက အခြေစိုက်ခဲ့သော (Stare decisis) ဟုခေါ်သော ရှေ့ကတရားစီရင်ထုံးများက လမ်းညွှန်အဖြစ် နောက်ပိုင်းအမှုဖြစ်ရပ်များ အပေါ်တွင် ကိုးကားဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Judicial Precedent) ဟုလည်းကောင်း၊ (Judge made law) သို့မဟုတ် (Case law) ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
မြန်မာတရားသူကြီးများက ယင်းဓလေ့ ထုံးစံကိုဆက်ခံ၍ တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စီရင်ထုံးများထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများက အာဏာသုံးရပ်တွင် အထောက်အကူပြုရာ ပွင့်သစ်စ အမျိုးသား နိုင်ငံတော်၏ ဖြစ်ထွန်းမှုကို အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
ဦးသက်ဖေ၊ ဦးဘိုးသာ စသည့် ထင်ရှားသော တရားသူကြီးများ၊ ဦးသန်းအောင်၊ ဦးဘစိန်၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်၊ ဒေါက်တာဘမော်၊ ဒေါက်တာဘဟန်၊ ပန်တနော်ဦးအေးမောင် စသည့်ဥပဒေပညာရှင်ရှေ့နေများ၊ ၀တ်လုံတော်ရများ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။
ဤခေတ်ကို မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး၏ ရွှေခေတ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ထင်သည်။
စိန်မှန်ကင်းအစစ် ထင်းဖြစ်ခဲ့ခြင်း (သို့မဟုတ်)
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် စော်ဘွားများ အာဏာစွန့်ရန် ပြဿနာနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပဗလီ မီးရှို့မှုကိုအကြောင်းပြု၍ ဗမာ့တပ်မတော် အတွင်းရှိ ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးကြီးများက ပေးစာနှစ်စောင်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ယာယီသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။
သမိုင်းတွင်သည့် ယင်းဖြစ်ရပ်ကို သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာကြီးကွယ်လွန်သူ (ဗန်းမော်တင်အောင်) က နန်းတွင်းလုပ်ကြံမှုကြီးဟု ကမ္ပည်းထိုးခဲ့သည်။
ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးကြီးများ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးသခင်ဗစိန် ဂိုဏ်းသားများက ၁၉၅၈ နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ရန် ၀တ်စုံပြည့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ် ၂ ရက်တွင် ဖက်ဒရယ်မူကို ခွဲထွက်မှုဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အပြီးအပိုင် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး၊ မြေရှင် အရင်းရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဟူသည့် ရွှေရည်စိမ်စကားလုံးများနှင့်အတူ တရားစီရင်ရေးနှင့် ပညာရေးကိုပါ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်လာခဲ့ကြတော့သည်။
အာဏာသိမ်းဆိုရှယ်လစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက လုပ်သားပြည်သူအပေါင်းအား အကျိုးပြုသော တရားစီရင်ရေးစနစ်တည် ဆောက်ရန်ဟုဆိုကာ အသွင်ကူးပြောင်းရန် အကြောင်းပြုပြီး အောက်ပါဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အက်ဥပဒေအမှတ် ၄၄ ဖြင့် အောက်ပါ ရာဇ၀တ်တရားရုံးများကို တည်ထောင်ခဲ့ သည်။
(ဂ) တွဲဖက်ခရိုင် ရာဇ၀တ်တရားသူကြီး ရုံးများ၊
(ဃ)ပထမတန်း ရာဇ၀တ်တရားသူကြီး ရုံးများ၊
(င) ဒုတိယတန်း ရာဇ၀တ်တရားသူကြီး ရုံးများနှင့်
(စ) တတိယတန်း ရာဇ၀တ်တရားသူ ကြီးရုံးများဖြစ်သည်။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် သခင်ဗစိန် ဂိုဏ်သားဖြစ်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနှင့် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီတပ်မှူးကြီးများက နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ အက်ဥပဒေအမှတ်-၁၅ အဖြစ် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အထူးရာဇ၀တ်ရုံး ဥပဒေဆိုသည်ကို ချက်ချင်းအာဏာတည်ရန် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ဤသည်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ဗြောင်ကျကျ သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် အထူးရာဇ၀တ်ရုံးဥပဒေ
ဤဥပဒေတွင် ပုဒ်မပေါင်း ၂၁ ခုနှင့် ဇယားတစ်ခုပါရှိသည်။ နာယကတစ်ဦးနှင့် အခြားအဖွဲ့ဝင်ပါရှိသော အထူးရာဇ၀တ်ရုံးကို ပုဒ်မ -၃ အရ မိမိကြိုက်သလောက် အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်အာဏာအပ်နှင်းသည်။ အထူးရာဇ၀တ်ရုံးသည် သေဒဏ်၊ နှစ်အကန့် အသတ်မရှိ တစ်ကျွန်းဒဏ်၊ ခုနစ်နှစ်အောက် မလျော့သော အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်။ ဤပြစ်ဒဏ်ကို ငွေဒဏ်နှင့်ပါ ပူးတွဲချနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ နောက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဇယားဝင်ပြစ်မှုများကို အထူးရာဇ၀တ် ရုံးကသာ စစ်ဆေးစီရင်ခွင့်ရှိသည်။ ရာဇ၀တ် ကျင့်ထုံးဥပဒေတွင် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အထူးရာဇ၀တ်ရုံး၏ အမိန့်ကို ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခွင့်မရှိ။
အထူးရာဇ၀တ်ရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များကို အတည်ပြုရန် ‘အတည်ပြု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ’ ဖြင့် ဖွဲ့ခွင့်ပြုသည်။ အတည်ပြုအာဏာပိုင်တွင် အယူခံရုံး၏ အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အတည်ပြုအာဏာပိုင်ထံ ရောက်ရှိသည့်အမှုတွင် အမှုသည် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေဖြင့်ဖြစ်စေ လျှောက်လဲတင်ပြခွင့်မရှိ၊ အတည်ပြုအာဏာပိုင်အဖွဲ့က လိုအပ်သည်ထင်မြင်မှသာ ထိုသို့ ကြားနာခြင်း ပြုနိုင်သည်။
အထူးရာဇ၀တ်ရုံးက စီရင်သည့်အမှုများတွင် အတည်ပြုအာဏာပိုင်က အတည်ပြုပြီးသော ခုနစ်နှစ်နှင့် ခုနစ်နှစ်ထက်ပိုသော ထောင်ဒဏ် (သို့မဟုတ်) သေဒဏ်ကိုသာ နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ်သို့ အယူခံတင်သွင်းနိုင်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုတရား စီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၆) အရ အထူးအယူခံခွင့် အခွင့်အရေးကိုလည်းမပေး၊ အခြားပြစ်ဒဏ်များတွင် အယူခံခွင့်မရှိ။
ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို ရုပ်သိမ်းခြင်း
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အမှုသည်များသည် ပြင်ဆင်ခွင့် အခွင့်အရေး (Revision right) နှင့် အယူခံအခွင့်အရေး (Right of Appeal) တို့ကို ဖျက်သိမ်းကန့် သတ်မှုသာမက ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ – ၄၉၈၊ ၅၂၆၊ ၅၂၈ တို့ကို အထူးရာဇ၀တ်ရုံးက စီရင်သော ပြစ်မှုများတွင် လျှောက်ထားသုံး စွဲခွင့်မရှိ။
ထို့ပြင် ယဉ်ကျေးသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာသည့် သက်သေခံဥပဒေပါ သက်သေထင်ရှားပြရန် တာဝန် (Burden of proff) ကို ဖျက်သိမ်းသည်။ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (၁) တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ တွင် လက်နက်ခဲယမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်မဲ့ဖြစ်စေ ဖမ်းဆီးရမိသူ မည်သူကိုမဆို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မတရားအသင်း၌ ပါဝင်သူမဟုတ်ကြောင်း တရားခံက သက်သေထင်ရှားမပြနိုင်သမျှ ထိုသူသည် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်သူဟု မှတ်ယူရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
အပိုဒ် (၂) တွင် သက်သေခံဥပဒေနှင့် အခြားတည်ဆဲဥပဒေများတွင် မည်သို့ပင်ပါ ရှိစေကာမူ ရဲအချုပ်၌ရှိသူ တရားခံ၏ ထုတ် ဖော်ပြောကြားချက်အရ လက်နက် (သို့) စာ ရွက်စာတမ်း တစ်ခုရရှိပါက ထိုသူ၏ ထုတ် ဖော်ပြောကြားချက်သည် ဖြောင့်ချက်သဘော သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မသက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သက်သေထင်ရှားပြသနိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သက်သေဥပဒေပုဒ်မ-၂၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်မှာအချုပ်၌ရှိသူ၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ရှိပါက ၎င်း၏ ညွှန်ပြချက်အရ ပစ္စည်းတွေ့ရှိကြောင်းသာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ဖြောင့်ချက်သဘော သက်ရောက်ပါကလည်း လက်ခံနိုင်သည်ဟူ၍ ဥပဒေတိုးချဲ့၊ ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဥပဒေသိပ္ပံပညာ၏ အခြေခံတရားကိုယ် (Doctrine) မူ (Principle) ဖြစ်သော ‘အပြစ်ရှိသူ ၁၀ ယောက် လွတ်မြောက်သွားနိုင်စေကာမူ အပြစ်မရှိသူတစ်ယောက်အား မှားယွင်းအပြစ် မပေးမိစေရ’ ဟူသော အချက်ကို အာဏာရှင်တို့က ပြောင်းပြန်ကျင့်သုံးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေသဘောအရ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူ ၁၀ ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားတွင် သက်သေအ ထောက်အထားမရှိ၍ ၁၀ ဦးလုံး လွှတ်ပစ်ပါက အပြစ်မဲ့သူ ကိုးဦးအား မှားယွင်းအပြစ်ပေးခြင်း မဖြစ်နိုင်တော့ဟူသည့် အခြေခံပင် ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ကမူ ဖမ်းခံရသူ ၁၀ ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ် နိုင်ရာ ၁၀ စဦးလုံးကို အပြစ်ပေးလိုက်ပါက အမှန်အပြစ်ရှိသူတစ်ယောက် လွှတ်မပေးနိုင်ဟူသည့် အတွေးအခေါ် ဖော်ပြချက်ပင်ဖြစ်သည်။
အထူးရာဇ၀တ်ရုံးအဖွဲ့ဝင်များအား ပြစ်မှုကြောင်း၊ တရားမကြောင်းအရ တရားစွဲဆို ခွင့်မရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးထားသည့်အပြင် ယင်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မခိုင်လုံဟုငြင်းပယ်ခွင့်မရှိစေရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
Posted in FeaturesTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ (၇)
ဥပဒေအရာရှိများသည် မိမိတို့၏ တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာသူနှင့် စွပ်စွဲခံရသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ပြောကြား
Posted on May 25, 2018 May 26, 2018 by နေရိုင်း၊ ဇေယျာထွန်း
ဥပဒေအရာရှိများသည် မိမိတို့၏ တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာသူနှင့် စွပ်စွဲခံရသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက မေ ၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများစာအုပ် မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။
“ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးဟာ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ သုံးရပ်စလုံးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဥပဒေအရာရှိတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ တရားစွဲနဲ့ အမှုလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာသူနဲ့ စွပ်စွဲသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းမှာကြားလိုပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပါဝင်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ပြည်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် အခြေခံ အခွင့်အရေးများရရှိရန်အတွက် အုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းဦးက ဆိုသည်။
၎င်းက “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေးဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ဦးစားပေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်နိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နဲ့ တရားမျှတမှုရရှိရေးဟာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးညီလာခံမှာလည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများနှင့် တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံထားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Fair Trials စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန် ပြုစုထားကြောင်း သိရသည်။
“ဥပဒေအရာရှိများအနေနဲ့ မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို လေ့လာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တရားစွဲနဲ့ အမှုလိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေးကို ဥပဒေနဲ့အညီ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်အပေါ် အများပြည်သူ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိလာခြင်းတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နစ်နာသူများနဲ့ စွပ်စွဲခံရသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိရေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေး နိုင်မှာဖြစ်သလို မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ရေးကိုလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါစံနှုန်းများသည် တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများဖြစ်သည့် လွတ်လပ်မှု၊ ဘက်မလိုက်မှု၊ သမာသမတ်ကျမှုနှင့် တရား မျှတမှုတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းဦးက ဆိုသည်။
မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်း တွင် ဥပဒေ၏ရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှမှု ရှိခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ ညီမျှစွာဆက်ဆံခြင်း၊ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိစေရေး၊ အပြစ်မရှိဟုမှတ်ယူခြင်းနှင့် သံသယအကျိုးခံစားခွင့်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေသည့် ဆက်ဆံမှု များမှကာကွယ်ခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ၀န်ခံထွက်ဆိုခြင်းမပြုဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခွင့်၊ ဥပဒေအကြံÓဏ်ရယူခွင့် နှင့် စကားပြန်နှင့် ဘာသာပြန်အကူအညီရယူ ခွင့် စသည့်အချက်များပါဝင်ကြောင်း သိရ သည်။
Posted in NewsTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on ဥပဒေအရာရှိများသည် မိမိတို့၏ တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာသူနှင့် စွပ်စွဲခံရသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ပြောကြား
တရားရုံးများတွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများထက် အမှုသွား အမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တရားရုံးများတွင် စတင်ဆောင်ရွက်နေ
တရားရုံးများတွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများထက် အမှုသွား အမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တရားရုံးများတွင် စတင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက ပြောကြားသည်။
မေ ၁၁ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် ပြုလုပ်သည့် အစိုးရဌာနများ၏ ပြည်သူများအတွက် ဒုတိယတစ်နှစ်တာ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက အထက်ပါကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက “ဒါကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ပုံမှန်စစ်ဆေးစီရင်မှုထက် အမှုသွားအမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်တာဟာ ပိုမိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ရတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစပြီး ဒီစနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက် အခုအခါမှာ အစီအမံတွေ ချပြီးတော့ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မှုခင်းပြီးပြတ်မှုနှုန်းသည် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမှုသွားအမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်သည့် ရှေ့ပြေးတရားရုံး အနေဖြင့် ကနဦး တရားရုံးသုံးရုံး၏ ပြီးပြတ်မှုသည် ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ထပ်မံတိုးချဲ့သည့် ရှေ့ပြေးတရားရုံးများ၏ ပြီးပြတ်မှုနှုန်းသည် ၉၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
“အဓိကအားဖြင့် တရားရုံးမှာ အမှုစစ်ဆေးတဲ့အခါ သက်သေ မလာရောက်တာတွေ၊ နှစ်ဖက်က ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေ ရုံးချိန်းတောင်းခံတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ စစ်ဆေးစီရင်မှု မပြုနိုင်ဘဲ အမှုရုံးချိန်းတွေ ချိန်းဆိုရတဲ့ ကိစ္စတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အမှုတွေ မစစ်ဆေးခင်ကတည်းက နှစ်ဖက်အမှုသည်တွေရဲ့ကြားမှာ ဒီအမှုကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားမယ်။ သက်သေစစ်ဆေးမယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့ အမှုတွေ မကြန့်ကြာဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို သတ်မှတ်တဲ့ အမှုသွား အမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တစ်ခုကို ကျွန်မတို့ စမ်းသပ်ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက ပြောကြားသည်။
ရှေ့ပြေးတရားရုံး အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လှိုင်သာယာ၊ ဘားအံမြို့နယ် တရားရုံးများနှင့် တောင်ငူခရိုင် တရားရုံးတို့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ချမ်းအေးသာစံ၊ မကွေး၊ ပုသိမ်မြို့နယ် တရားရုံးများနှင့် မုံရွာ၊ မော်လမြိုင်ခရိုင် တရားရုံးများတွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက ဆိုသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တရားရုံး အဆင့်ဆင့်တွင်ရှိသည့် မှုခင်းစစ်ဆေးနိုင်မှုသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ပြန်လည် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက စစ်ဆေးပြီးပြတ်သည့် အမှုအရေအတွက် ပိုများကြောင်း၊ ထို့ပြင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် စွဲဆိုသည့် အမှုအရေအတွက်လည်း များနေကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်နွယ်စိုးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
စီရင်နိုင်ပိုင်ခွင့်အား ပြောင်းလဲစီရင်နိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံးနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် တရားရုံးနှစ်ရုံးသည် ယခင်လောက်ကိုင်ခရိုင် တရားရုံးကို ကိုးကန့်ဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံးအား စက်တင်ဘာတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် တရားရုံးအသစ် အနေဖြင့် စီရင်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged တရားစီရင်ရေး, တရားရုံးLeaveaComment on တရားရုံးများတွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများထက် အမှုသွား အမှုလာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တရားရုံးများတွင် စတင်ဆောင်ရွက်နေ
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် တရားစီရင်ရေးဖြစ်ရေး၊ ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ရေး အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ပြောကြား
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် တရားစီရင်ရေးဖြစ်ရေး၊ ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ရေး အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်များ၏ အထူးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်များ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတရားရုံးများ အပါအ၀င် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများအား ခွဲဝေအပ်နှင်းထားပြီး မိမိတို့တရားသူကြီးများနှင့် တရားရေးအရာရှိများသည် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားရုံးစီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသူများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် တရားစီရင်ရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရေး၊ ပြည်သူအများ ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာရေးအတွက် မိမိတို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး ပြပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ၍ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သုံးနှစ်တာ တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး နောက်ငါးနှစ်တာ တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီးလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှုများကို ဥပဒေ၊ ကျင့်ထုံး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးပြတ်အောင် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေး၊ အဂတိတရားကင်းစင်ရေး၊ တရားရုံး သက်သေခံပစ္စည်းများ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ မှန်ကန်မျှတသော ၀န်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တို့က အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်များ သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ တရာစီရင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် လူတိုင်းသို့ အရည်အသွေးမြင့် တရားမျှတမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရေးနှင့် တရားရုံးများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုရှိသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မြှင့်တင်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အထူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
Posted in PoliticsTagged တရားစီရင်ရေး, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးLeaveaComment on လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် တရားစီရင်ရေးဖြစ်ရေး၊ ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ရေး အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ပြောကြား
အမှုများကို ဥပဒေ၊ ကျင့်ထုံး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးပြတ်ရန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေးနှင့် အဂတိတရား ကင်းစင်ရေးတို့ကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ပြောကြား
Posted on April 21, 2018 April 22, 2018 by Eleven Media Group
အမှုများကို ဥပဒေ၊ ကျင့်ထုံး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးပြတ်ရန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေးနှင့် အဂတိတရား ကင်းစင်ရေးတို့ကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာရေးအတွက် အထူးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည်။
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ အထူးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေး၌ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှုများကို ဥပဒေ၊ ကျင့်ထုံး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးပြတ်အောင် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေး၊ အဂတိတရားကင်းစင်ရေး၊ တရားရုံးသက်သေခံပစ္စည်းများ စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရေး၊ မှန်ကန်မျှတသော ၀န်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးတို့ကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တို့က အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်များ သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ တရားစီရင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် လူတိုင်းသို့ အရည်အသွေးမြင့် တရားမျှတမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရေးနှင့် တရားရုံးများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုရှိသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မြှင့်တင်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အထူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်များ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတရားရုံးများအပါအ၀င် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများအား ခွဲဝေအပ်နှင်းထားပြီး မိမိတို့တရားသူကြီးများနှင့် တရားရေးအရာရှိများသည် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ တရားစီရင်ရေးနှင့် တရားရုံးစီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသူများဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် တရားစီရင်ရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရေး၊ ပြည်သူအများ ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာရေးအတွက် မိမိတို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ၍ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သုံးနှစ်တာတရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
အထူးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်များ၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးကို ဧပြီ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၁၁ ရက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာစေရေးအတွက် မည်သို့ကြပ်မတ်သွားမည်ကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားစေလိုကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်များအထိ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုစနစ်များဖြင့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာကို ဆုံးရှုံးစေသည့် သက်သေခံပစ္စည်း ပျက်စီးမှုများကို ပြုပြင်ကြပ်မတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားခွင်များတွင် တရားသူကြီးများအနေဖြင့် ဥပဒေများ၊ ကျင့်ထုံးများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တိကျမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ယှဉ်၍ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က မှာကြားခဲ့သည်။
Posted in PoliticsTagged တရားစီရင်ရေး, ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်LeaveaComment on အမှုများကို ဥပဒေ၊ ကျင့်ထုံး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးပြတ်ရန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေးနှင့် အဂတိတရား ကင်းစင်ရေးတို့ကို အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ပြောကြား
တရားရုံးက အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှုခင်းများတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းသစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စမ်းသပ်အစီအစဉ်များ စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ထုတ်ပြန်
Posted on February 1, 2018 February 2, 2018 by Eleven Media Group
တရားရုံးက အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှုခင်းများတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းများ ကျင့်သုံးခြင်းစသည့် နည်လမ်းသစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စမ်းသပ်အစီအစဉ်များ စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
မြန်မာတရားစီရင်ရေး စနစ်တိုးတက်လာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားပြီး ယခုစီမံကိန်းသည် ဒုတိယမြောက် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းသည် တရားစီရင်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေး၏ လူတိုင်းသို့ အရည်အသွေးမြင့်တရားမျှတမှု ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ တရားရုံးများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုရှိသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြှင့်တင်ရန် ရည်မှန်းချက်များကို စီမံကိန်း၏ ပန်းတိုင်အဖြစ်ထားရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါပန်းတိုင်သို့ရည်မှန်း၍ တရားရုံး ၀န်ဆောင်မှုများ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အများပြည်သူ၏ အသိအမြင်မြှင့်တင်မှု၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်၊ တရားစီရင်ရေး၏ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု၊ ထိရောက်သော မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရုံးက ဆောင်ရွက်သော အထူးမှုခင်းကိစ္စစသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့ပြင် စီမံကိန်း၏ ပထမနှစ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တွင် တရားစီရင်ရေး၏ လွတ်လပ်မှုကို ဖော်ဆောင်ရေး၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေး ဥပဒေဖြင့် အကူအညီလိုအပ်နေသောသူများသို့ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် ဥပဒေရေးရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးနိုင်ရေး၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများအပေါ် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှုများပေးရေး၊ ပြည်သူများ တရားရုံးသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိရေး၊ တရားသူကြီးများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများ မြင့်မားလာစေရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် တရားရုံးက အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မှုခင်းများတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ ကျင့်သုံးခြင်းစသည့် နည်းလမ်းသစ်များအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စမ်းသပ်အစီအစဉ်များ စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို ယခင်သုံးနှစ်တာ ဗဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုရလဒ်များ၊ တရားမျှတမှုကဏ္ဍမှ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ တရားရုံး ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ဖြေကြားသည့်စစ်တမ်းများ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ဌာနများ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များမှ အကြံပြုချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged တရားစီရင်ရေးLeaveaComment on တရားရုံးက အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှုခင်းများတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းသစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စမ်းသပ်အစီအစဉ်များ စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ထုတ်ပြန်